Tag: ndị debanyere aha email | Martech Zone
Tag: ndị debanyere aha email
Wzọ 15 iji bulie aha ahia Email gị
Fraịde, Ọktọba 18, 2013 Tọzdee, Ọktoba 17, 2013 Douglas Karr
Uto, uto, uto… onye obula n’ile anya inweta ndi ohuru ohuru, ndi n’eso uzo ohuru, ndi obia ohuru, ohuru .. ohuru. Kedu maka ndị ọbịa gị dị ugbu a? Kedu ihe ị na-eme iji melite ohere iji mee ka ha bịarukwuo gị na azụmahịa. Anyị emehiela onwe anyị… na-achọ maka ọchụchọ ka mma, nkwalite, ịbawanye mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Nsonaazụ a na-abụkarị ndị ọbịa na saịtị ahụ mana ọ bụchaghị ego na-enwetaghị. Na-eto eto ndepụta email gị kwesịrị ịbụ
Fraịde, Machị 5, 2010 Fraịdee, June 19, 2015 Douglas Karr
Kwa ụbọchị, Martech Zone na-ezipụ ozi-e site na CircuPress nke na-agbanwe ndepụta ndepụta blog na-akpaghị aka na email HTML nke ọma. E nwere naanị mmadụ ole na ole na-eji ya - akụkụ dị nta nke ndị na-agụ blog a kwa ụbọchị. Nke ahụ dị mma… ọ bụ niche ma na-azụ ndị chọrọ ya. Anaghị m agbalị iji artificially na-eto ndepụta, ọ nwetara nnukwu njigide ma na-atọ ndị na-eme